ဘယ်လို Emojis စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးချလျက်ရှိသည်
Emojis သည်သင်၏စျေးကွက်ဆက်သွယ်ရေးတွင်ရှိပါသလား။ ?
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 8, 2016 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ငါအသုံးပြုတယ်သိလား ခေါင်းစဉ်အတွက်, ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ဆိုလိုသလား။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ emojis (emoticons ၏ဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြု) ၏အသုံးပြုမှုကိုမရောင်းဘူး။ စီးပွားရေးဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်မှာစာတိုတိုဖြတ်တောက်မှုနဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုကြားမှာငါဟာတစ်ခြားနေရာတစ်ခုမှာတွေ့ရတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသူတို့ကိုအမှန်တကယ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် Facebook မှတ်ချက်ရဲ့အဆုံးမှာသူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုထိုသူအားငါသူတို့မျက်နှာ၌ငါ့ကိုလာကြတယ်ချင်ကြဘူးကြောင်းသိစေချင်ပါတယ်။ ?
Emoji ဆိုသည်မှာအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးတွင်စိတ်ကူးတစ်ခု (သို့) စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောသေးငယ်သောဒီဂျစ်တယ်ပုံသို့မဟုတ်အိုင်ကွန်ဖြစ်သည်။ emoji ဟူသောဝေါဟာရကိုဂျပန်မှယူကာအီးမှလာသည် ရုပ်ပုံ + မိုဂျီ အက္ခရာသို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်.
ပြီးတော့ Emoticon ဆိုတာဘာလဲ။
Emoticon ဆိုသည်မှာ keyboard အက္ခရာများပါသော facial expression တစ်ခုဖြစ်သည်။ ;), emoji အဘယ်မှာရှိသနည်း။
Emojis သည်နေ့စဉ်လူ့ဘာသာစကား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အမှန်မှာ၊ Emogi သုတေသနမှ ၂၀၁၅ Emoji အစီရင်ခံစာတွင်အွန်လိုင်းလူ ဦး ရေ၏ ၉၂% သည် emojis ကိုအသုံးပြုကြပြီး ၇၀% က emojis ကသူတို့၏ခံစားချက်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာဖော်ပြရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ Oxford အဘိဓါန်အွန်လိုင်း ပင်ယခုနှစ်၏စကားလုံးအဖြစ်တစ် ဦး Emoji ရွေးချယ်ခဲ့သည်! ?
သို့သော်အချို့စျေးကွက်များက၎င်းတို့ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိသည် တကယ်တော့, အမှတ်တံဆိပ် 777 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကတည်းက 2015% အားဖြင့် emojis အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ပါပြီ။
Signal မှဤအချက်အလက်သည်အသုံးပြုမှုဥပမာများစွာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ Bud Light၊ Saturday Night Live၊ Burger King၊ ဒိုမီနို၊ McDonald's နှင့် Taco Bell တို့က emojis များကို၎င်းတို့၏စျေးကွက်ဆက်သွယ်ရေးတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်။ Emoji-enabled ကြော်ငြာများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်ထက် ၂၀ ဆပိုမိုမြင့်မားသောကလစ်နှိပ်ပါ
Signal သည် Emojis နှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုများကိုလည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ?
Tags: ဖူးအငုံထွက်အလင်းဘာဂါဘုရင်ဒိုမီနို၏ရုပ်ပြောင်emoji စျေးကွက်ရှာဖွေရေးချစ်သူမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်signal ကိုအပြုံးမျက်နှာtaco ခေါင်းလောင်း